‘Farmaajo haddii uu diido Dhuusamareb 4 waa in laga dabageeyo saaxibkii Khayre’ | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Faalooyinka ‘Farmaajo haddii uu diido Dhuusamareb 4 waa in laga dabageeyo saaxibkii Khayre’
Doorashada 2020/2021-ka waxaa lagu xeerinayaa “Sharciga Doorashoyinka Qaranka ee Heer Federal”, ee Labada Gole-ogolaadeen 2/2/2020, isla-markaasna Madaxweyne Farmaja-na saxiixay 20/2/2020 kii.
Iyo in doorashadu tahay “Hal-Qof-iyo-Hal-Cod”.
In uu si cad oo aan leex-leexad lahayn umadda Soomaaliyeed ugu sheego in uu aqbalay baaqii Maamul Goboleedyada, Madasha Xisbiyada Iyo Aqalka Sare ee ahaa in Dalka laga qabto “doorasho la-isla-ogolyahay isla markaasna ku dhacda waqtigeeda”.
In Madaxweynuhu ku dhawaaqo ‘Shirka Dhusa-Mareeb 4″ isla markaasna horay usii sheego in wax lagu duldhisi-doono mirihii “Shirkii Dhusa-Mareeb 2”, isla markaasna meesha laga saaray wixii ka soo baxay “Shirkii Dhusa-Mareeb 3”.
Previous articleFNP Coalition welcomes Dhusamareb deal, calls for more consultations
Next articleAl-shabaab oo soo bandhigay muuqaalka mid kamid ah saraakiishooda caanka ahaa oo duqayn lagu dilay